Tankr.io - Tank Realtime Battle 5.7 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.7 လြန္ခဲ့ေသာ3ပတ္က
ဂိမ္းမ်ား အက္ရွင္ Tankr.io - Tank Realtime Battle
Tankr.io - Tank Realtime Battle ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
Tankr.io တစ်ခုလုံးကိုအသစ်သောအကြံပေးအဖွဲ့ပစ်ခတ်မှုနှင့်ကျန်ရစ်သူဂိမ်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဂိမ်း၏ရည်မှန်းချက်ကိုမြေပုံပေါ်တွင်သင်၏ပြိုင်ဖက်၏အားလုံးအနိုင်ယူသူ, နောက်ဆုံးသောတစ်ဦးမှတိုက်ထုတ်ရန်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါသင်သည်ရှင်သန်နှင့်အနိုင်ရပါလိမ့်မယ်! ယခုကောက်ကျစ်ရန်သူများကိုစစ်တိုက်ခြင်း,
သင်တစ်ဦးအကြံပေးအဖွဲ့ချစ်မြတ်နိုးတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စိတ်ဖိစီးမှုစိတ်သက်သာရာရှာနေလြှငျ, tankr.io သင်တို့အဘို့စောင့်ဆိုင်းနေခြင်းဖြစ်သည်! ထူးခြားတဲ့ကန်စစ်တိုက်ဂိမ်းကြိုးစားပါနှင့်ပျော်မွေ့!
- သင့်လက်ချောင်းကိုမျက်နှာပြင်ကိုထိရသောအခါကို virtual ထိန်းချုပ်မှုလီဗာဖွငျ့ဝိုငျးရွှေ့ရန်သင့်တင့်ကားကိုထိန်းချုပ်ပါ။
- မီးဘေးနှင့်သူတို့တက်ပြပါနှင့်နီးစပ်လာသည့်အခါသင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက် shoot ။ သင့်ရဲ့အကြံပေးအဖွဲ့ကိုအလိုအလျောက်သင့်ရဲ့ပြိုင်ဘက်မှာရည်ရွယ်ထားပါလိမ့်မယ်။
- သင်သတ်ပစ်ပိုမိုပြိုင်ဘက်, မြင့်မားသင့်ရဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်!
- ရိုးရှင်းသော & လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုနှင့်အတူရီးရဲလ်အချိန်အကြံပေးအဖွဲ့စစ်တိုက်ဂိမ်း
- ကလစ်တစ်ချက်နှိပ်ရုံနှင့်အတူ auto-ပစ်မှတ်ထား
- Highly optimized ဂရပ်ဖစ်များနှင့်အသံ
- 3D အခန်းကဏ္ဍနှင့်မြင်ကွင်းတစ်ခု, အလွန်ကောင်းမွန်တဲ့တိုက်ခိုက်ရေးအမြင်အာရုံသက်ရောက်မှု
- သင့်ရွေးချယ်မှုများအတွက်အရေခွံများနှင့်တင့်ကား Cool ။ သင့်ကိုယ်ပိုင်တဦးတည်း Make!
Tankr.io Download နှင့်ယခုစစ်တိုက်ရာတွင်ပျော်မွေ့! ပျော်ရွှင်ပါစေ!
Tankr.io - Tank Realtime Battle အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Tankr.io - Tank Realtime Battle အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Tankr.io - Tank Realtime Battle အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Tankr.io - Tank Realtime Battle အား အခ်က္ျပပါ
apkfr717 စတိုး 11 23.52k
Tankr.io - Tank Realtime Battle ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Tankr.io - Tank Realtime Battle အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.7
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://thehotgames.com/Public/tos.html
Release date: 2019-07-30 11:59:07
လက်မှတ် SHA1: 6B:D0:1B:27:20:0F:C6:98:62:F5:45:7A:0D:E7:3B:FF:CE:72:73:2A
Tankr.io - Tank Realtime Battle APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ